Midowga Afrika oo AMISOM ku Amray in ay farageliso Xaaladda Golaha Shacabka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Midowga Afrika oo AMISOM ku Amray in ay farageliso Xaaladda Golaha Shacabka
Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu amray in ay farageliyaan Xaaladda Ammaan ee xarunta Golaha Shacabka si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyadda iyo Xiisadda Baarlamaanka.
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxda Midowga Afrika ee ku sugan Addis Ababa ay amar ku bixiyeen in ciidamada AMISOM ay ilaaliyaan Ammaanka Hay’adda dowladda oo baarlamaanku ugu horreeyo.
“Dhibaatadii ugu danbaysay xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee Arbacadii la soo dhaafay, taasoo horseedaysa faragalinta Ciidamada AMISOM ee ka shaqeynaya taageeridda, iyo isku xirka Ciidamada Qaranka ee Amniga Qaranka si wax looga qabto xaaladda”ayuu yiri Mandeira.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in AMISOM ay gudan doonto Waajibka Saaraan ee ah ilaalinta Amniga Xarunta Golaha Shacabka.
“Waxaa ay Amar ku bixiyeen hoggaamiyeyaashayda ugu sareeya ee Addis Ababa ku sugan in Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ay waajib ku tahay in ay ka shaqeeyaan taageerada Ciidamada Nabadgelyada ee Soomaaliya si loo sugo amniga hay’adaha Qaran ee Soomaaliyeed iyo kan Baarlamaanka” ayuu Markale yiri Mandera Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Waxaa uu intaa ku daray ” Sida aad ogtihiin dhammaantiina, waxa aanu mareynaa xaalad siyaasadeed oo adag. Aqalka hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaan Golaha Shacabka waxa uu xilligan u kala qeybsan yahay laba kooxood oo iska soo horjeeda”